4th Beyond Pressure Preformance Art Festival Myanmar, 2011
စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ဘီယွန်းပရက်ရှာ နိုင်ငံတကာ ပါဖော်မန့် အနုပညာပွဲတော် ကို ဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်နေ့မှ 10ရက်နေ့ အထိ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့မှာ ပွဲစီစဉ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ် ။
စကထဲက ယဉ်သကိုဆိုသလို ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ အစိုးရအသစ်ကြီးဟာ ဟီလာရီကလင်တန် လာတာကို အကြောင်းပြပြီး ပွဲကျင်းပခွင့် ပါမစ် ချမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တရားဝင် ခွင့်တောင်းတာမရလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ချတာပေါ့ဆိုပြီး ၊ ရန်ကုန်စိမ်းလန်းစိုပြေ ပန်းခြံနဲ့ မန္တလေးကန်တော်ကြီး ထဲမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘီယွန်းပရက်ရှာပွဲက ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အနုပညာရှင် တစ်ချို့ရဲ့ လက်ရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အီတလီက Daniel Nvda Veritas Beltrani
Daniela Nvda Veritas Beltrani'
Jacques van Poppel(Holland) ရဲ့ workshop
အင်ဒိုနီးရှားက Ferial Afiff ရဲ့ workshop
မရတ်လင်းထွန်းရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
မရတ်ရဲ့ လက်ရာအစိတ်အပိုင်းထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သတိထား ရဲ့ လက်ရာ
Jasom Limm (Singapore)
Wen Yau (့Honkong)
Posted by phone myint at 7:29 PM2comments: Links to this post
1. အချစ် - Love
2.သွေး - Blood
3.သကြား - Sugar
4.လိင် - Sex
5.မျက်လှည့် - Magic
Posted by phone myint at 9:30 PM No comments: Links to this post
အို ! . . အိမ်ကလေး . . . သင့် အား ငါ ပြင်းပြင်း ရှရှ လွမ်း၏ . . ။
မည်းမှောင်နေသော မြို့ကြီး အတွင်းမှ ပေါ်ထွက်လာသော အိမ်လွမ်းဝေဒနာမှာ နာသာခံခက် ၊ အတွင်းပိုင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သို့ တမြေ့မြေ့ တိုက်စားနေသော ဒဏ်ရာ ၊ဒဏ်ချက် များပင်
အိမ်ဟုဆိုလိုက်လျှင် အများအားဖြင့် မိသားစုဟု အနက်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြပြီး ၊ နွေးထွေးလုံခြုံမှု ပေးနိုင်သည့် အသိုက်အမြုံ သို့မဟုတ် ဘဝဖော်အချင်းချင်း အမှီသဟဲပြုရာ သာယာပျော်ရွင် မှု ဟု အလိုလို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
“ အိမ်ပြန်မယ် ” ဟု ရည်ညွှန်း စိတ်ပြုလိုက်ရုံဖြင့် ဘ၀င်စိတ် အတွင်းတွင် သာယာပျော်ရွှင်မှု ၊ လုံခြုံ စိတ်ချရမှု ၊ အထီးကျန်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ရမှု တို့ဖြင့် အားအင် သတ္တိများ ပြည့်လျှံလာကာ ၊ ငြိမ်းချမ်းရာ ဘုံဘဝသို့ တွယ်ငြိ ဆိုက်ကပ်မိသော ဝိညဉ် တစ်ခု ၏ ခံစားမှုကဲ့ သို့ပင် ဖြစ် ၏ ။
သူ့ငယ် ဘဝ နေထိုင်ခဲ့ ရသော အိမ်ကလေးမှာ ရန်ကုန် မြို့လည် ရှိ ဆူညံသံများ အနည်းငယ် ရောယှက် နေသော ခြံဝင်းကျယ်ကလေး တစ်ခု အတွင်း၌ ဖြစ်သည် ။ နှစ်ဆောင်ပြိုင် အိမ်ကြီး၏ လေးခန်းတွဲအိမ်ခန်းလေး ၏ ဘယ်စွန်မှာ သူနှင့် သူ့မိသားစု ကလေး နေထိုင်ခဲ့ကြဖူးသည် ။ သူက သူနေထိုင်သော အခန်းကလေးကို နှလုံးသား ထောင့်ကျဉ်းဟု တိတ်တဆိတ် အမည်ပေးခဲ့သည် ။ မိသားစုတွေ ဖရိုဖရဲ မဖြစ်ခင် ရွှေအိုရောင် နေ့ ရက်များ ။ စိတ်ထဲ စွဲထင်နေသော အခန်းချင်းကပ်လျှက် ငယ်သူငယ်ချင်း မိသားစု ။ “မမလေး” ၊ “ဘဘ” ၊ “ကြီးကြီး” အစရှိသော စိတ်ပုံရိပ်များ ။ အဲလစ်ရဲ့ အံဖွယ်ကမ္ဘာထဲသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ရသလို စွဲထင်ရစ်နေသော “ဘဘ”၏ စာအုပ်တွေ သိမ်းဆည်းထားသော ဗီရိုကြီးတွေ ၊ ထင်းရူး သေတ္တာ ကြီးတွေ ။
ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာ စာအုပ်ပုံကြားထဲ လှဲလျှောင်းခွေ နေသော ပိန်ခြောက်ခြောက် ညိုညစ်ညစ် ကောင်လေး တစ်ယောက်၏ ပုံရိပ် . . . ၊ အောက်ထပ် အခန်း ၂ ခန်း မှ ကစားဖော် ညီငယ် ၊ ညီမငယ် လေးများ . . ၊ ဂိုးတိုင်လုပ် ဂိုးဖမ်းခဲ့သော မာလကာ ပင်ကြီး ၂ပင် ...၊ တာဇံ လုပ်တမ်း ဆော့ခဲ့ရာ စောင်းလျှား ပင်နှင့် ခြံထောင့်က ပိန္နဲပင်ကြီး ... ၊ ညဘက် ခြံထိပ်မှာ ဂစ်တာ လာတီးနေကြ အကိုကြီးတွေ ..၊သူတို့နှင့် သီချင်း လိုက်ဆိုရင်း လေ့ကျင့်ခဲ့ရသော ဂစ်တာကော့ဒ်တွေ ..၊ ဆေးလိပ်ခိုးသောက်တဲ့ ညများ . . ၊ အဲ့ဒီ အချိန် ကာလက ခေတ်စားနေသော ဘရိတ်ဒန့်စ်ကရင်း ရိုက်ပွဲလေးများ ဆင်နွှဲခဲ့ရသော တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် . .၊ အိမ်ပြန်မအိပ်ခဲ့သော ရက်သတ္တပါတ် ပေါင်းများစွာ အစရှိသဖြင့် . . . . ။
ထို့နောက် လေပြင်းမုန်တိုင်းကျသလို တစ်တိုင်းပြည်လုံး တုန်လှုပ်ခဲ့ရသော အပြောင်းအလဲ ၊ အဖြစ်အပျက်ကြီး က သူတို့ ခြံဝင်းလေးကိုပါ ပုတ်ခတ်လှုပ်ရှား သွားစေခဲ့သည် ။
ခြံဝင်းလေးထဲမှ အရင်ဆုံး နှုတ်ဆက် ခွဲခွာသွားကြသူများမှာ ငယ်သူငယ်ချင်း မိသားစုကလေးက “ဘဘ” ၏ အလုပ်တာဝန်ဖြင့် တစ်နေရာသို့ မမလေးနှင့် အကိုလို တွယ်တာရသူ နှစ်ယောက်မှာကား ထိုထက်ဝေးကွာ သော အဝေး တစ်နေရာသို့ . . ဘဝဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှု ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်သာ ပါဝင်ပြီး အစီအစဉ် မကျမှုများစွာနှင့် လွဲချော်ခြင်း ခပ်များများ ပေါင်းစပ် ပါဝင်သော အရာ ပါလားဟု သူစတင် မျက်ခုံးပင့် ကြည့်လိုက်မိသည် ။
သူနှင့် သူ့မိသားစုလေးသည်လည်း ထိုစဉ်ကာလ က ရေစီးကြောင်းတစ်ခုလို အားကောင်းလှသော မြို့သစ် လေးများဆီသို့ ဦးတည်စီးမျောခဲ့ရလေသည် ။ မတူညီသော အသိုင်းအဝိုင်း ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်း နှင့် ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသော မြို့သစ်ညနေခင်းများ၏ ရိုက်ခတ်မှုက မြို့လည်ခေါင်မှ ရုတ်တရက် ပြောင်းရွေ့လာရသော သူ့အတွက် မသက်သာစေခဲ့ ။ ပျင်းရိ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ မြို့သစ်နေရက်များကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အတွက် သူ့ဂစ်တာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တီးခတ်တတ်လာသည် ။ စက္ကူအလွတ်တွေပေါ်မှာ စကားလုံးများစွာ ဟိုခြစ် ဒီခြစ် ခြစ်တတ်လာ ခဲ့သည် ။ သူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ရုံးက ပြန်လာမည့် မြေနီလမ်းကလေးပေါ် စောင့်မျှော် ထွက်ကြိုရင်း ရုံးမှ အပြန် ဆုံနေကြ ကောင်မလေး တစ်ယောက် အပေါ်မှာ ရင်ခုန်လာမိခဲ့သည် ။ စစ်တုရင် ကစားခြင်းကို အလွန်အမင်း နှစ်သက် ခုံမင်လာခဲ့ပြီး ။သူ၏ လူငယ်ဘဝ အရိပ်ရှည်ရှည် လျားလျားက အရက်ဆိုင်များ အတွင်းသို့ ပျော်ဝင်သွားခဲ့ပြန်သည် ။
မမျှော်လင့်ပဲ နိမ့်ပါးသွားသော အခြေအနေနှင့် ဖိစီးလာသော ငွေကြေး အခက်အခဲများကြားတွင် သူနှင့် သူ့ညီ၊ ညီမငယ်လေးတို့မှာ လူးလွန့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြရသည်။
ရွေးချယ်ခွင့်များစွာ မရှိသော သူ့အတွက် သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်သို့သွားရောက် နေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည် ။ အချိန် ကြာလာသည်နှင့် အမျှ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် အိမ်မဟုတ်သည့် အိမ်တစ်လုံး၏ သူစိမ်း ဆန်မှုကို ရုတ်တရက် ကြုံတွေ့လိုက်ရတော့ သူ့အတွက် အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်စေခဲ့ရပြန်သည်။ မြို့ပြ၏ ခမ်းနားကြီးကျယ်မှုကလည်း အဆင်မပြေသောနေ့ရက်များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်သော သူ့အတွက် လေးလံသော ဖိစီးနှိပ်စက် မှုပင် ။ ကွန်ကရစ်တောအုပ်ကြီး၏ ရယ်မော ခြောက်လှန့်သံကို မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး သူ့ခြေလှမ်းများက မြို့သစ်လေးရှိ ရယ်စရာနည်းနည်း မောစရာများများ အိမ်ကလေး ရှိရာသို့ ဦးပြည်လှည့် လိုက်၏ ။ ထိုအချိန်မှစ၍ သက်မဲ့ အိမ်ကလေး တစ်လုံးအတွင်းတွင် ခံစားမှု စိတ်ဝိညဉ်နှင့် အသက် ရှိနေကြာင်း သူ့ကို သတိပြုမိခဲ့စေ၏ ။
ရွေ့လျားနေသော အချိန်ကာလနှင့် မမြင်ရသော အကြောင်းအရာများက သူနှင့်သူ့မိသားစုလေးကို ဆင်ခြေဖုံးရှိ အခန်းငယ်လေး တစ်ခု အတွင်းသို့ တွန်းထိုး သယ်ဆောင်သွားပြန်လေသည် ။ သူ့အနေဖြင့် ဘ၀ဆိုတာ အလေးအနက် ထားစရာလို့ မမြင်နိုင်တော့ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အရွဲ့တိုက် လောကဓံတရားနှင့် တွန်းထိုးရန်ဖြစ်ရင်း “လူပုံအလည်.. မနေချင် .. တစ်ယောက်ထဲပဲ.. ရင်ခုန်သံအသေတွေကို.. ဖြန့်ကျဲပြီး အခန်းငယ်ထဲ” စသည့် စာသားများပါဝင်သော ရော့ခ် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ဆိုငြီးနေခဲ့မိသည် ။
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေရသော ဖြစ်စဉ်ကြီး တစ်ခုလုံးအတွင်းမှာ မသေချာ မှုများစွာပဲ ရှိနေခဲ့သည်ဟု တဖြေးဖြေး သူ သက်ဝင်ယုံကြည်လာခဲ့ သည်။
အိမ်ကလေးပေါင်း များစွာ၏ အသံမဲ့ဘာသာစကားကို သူအနည်းငယ် နားလည်လာခဲ့ သည့်အချိန်မှစ၍ “ လောကသည် ရှိ၏ ထိုရှိနေသော လောကအတွင်း ဘာမှ မရှိခြင်းသာ ရှိ၏ ” ဟူသော အတွေးကို အလေးအနက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားနေရင်း အိမ်ပေါင်းများစွာ ၏အသံမဲ့ အသံများစွာကို သူစုဆောင်း ရှာဖွေနေခဲ့မိသည်။
ရပ်ဝေးမြေခြားရှိ သူနေထိုင်ခဲ့ရသော အလုပ်ရှင်မှပေးသည့် စုပေါင်း အိမ်ယာ အတွင်းမှာ ..၊ အဆောင်တစ်ခု၏ အခန်းကျဉ်း ထဲမှာ ၊ လူအများ အစုစပ်စုငှားနေရသည် အိမ်ငယ်ကလေးအတွင်းမှာ ၊ နေ့ဘက်တွင် ရုံး ဖြစ်ပြီး ညဘက် လူပေါင်းများစွာ အခကြေးငွေပေး အိပ် ရသည့် အဆောက်အဦးအတွင်းမှာ ၊ ချစ်သူ ခင်သူတို့နှင့်ဝေးရာ မိကွဲဖကွဲ အခန်းလေးမှာ .. နာကျင်ကြေကွဲနေသည် အ်ိမ်ကလေးများ ၏ အသံများစွာကို သူစုဆောင်းရရှိခဲ့ပြီးနောက် ...
သူ့အသွေးအသားထဲမှာ ကျယ်လောင်စွာ တောင်းဆိုနေတာက . . အတ္တ ၊မာန ၊ ဒေါသ ကင်းစင်တဲ့ အိမ်ကလေးတွေရဲ့ အသံ ၊ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာ ကြည်နှုးမှုတွေနဲ့ ပြည့်လျှံနေတဲ့ အိမ်ကလေးတွေရဲ့အသံ . . ချစ်သူခြင်း နားလည်မှုတွေနဲ့ ဖြူစင်ဝင်းလက်နေတဲ့ အိမ်ကလေးတွေရဲ့ အသံ ၊ အထီးကျန်မှုတို့ ကင်းဝေးရာ ဆည်းလည်းလေးတွေ ရယ်မော ပျော်ရွင်နေတဲ့ အိမ်ကလေးတွေရဲ့ အသံလို့ အသေအချာ သိရှိ နားလည်ခဲ့လိုက်တော့သည် ။
သူ့ခြေလှမ်းများက သူ့မြို့လေးရှိရာ ဦးတည်လျက် ၊ မြေနီလမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်လာရင်း .. မျှော်လင့်ခြင်းအပြည့်နဲ့ ခြံတံခါးလေးကို တွန်းဖွင့်လိုက်တော့ . . . မိုးရေစက်တွေကြားများ အချိန်ကာလာများစွာ သူ့ကိုစောင့်စားရင်း ဖျားနာ သေဆုံးနေပြီဖြစ် တဲ့ ခြောက်သွေ့ အိမ်ကလေးကို တွေ့လိုက်ရလေရဲ့ . . .။
Posted by phone myint at 9:16 PM No comments: Links to this post
စတင်ထိတွေ့လိုက်ရတာနဲ့ ပိတိတွေဖျာသွားသလို အလိုလို ချုံးပွဲချငိုကြွေးမိ၊ အရင်တုန်းကတော့
သူ့ကိုယ်အပေါစား လူမိုက်တစ်ယောက်လို့ထင်ခဲ့၊သူ့ဗလနဲ့ကိုယ့်ဗလနဲ့ ချကြရင် တရားမျှတပါ့မလား လို့
တွေးမိခဲ့၊ပဉ္စ၀ုဓ မင်းသားလို သေသော်မှသည် အော်ကောင်း၏လို့ ကြွေးကြော်ရမလားလို့ စဉ်းစားမိ၊
တစ်ကောင်လို ကိုယ့်ခြေရင်းမှာ ၀ပ်ဆင်းနေပါလေရော ။ သူ့အတွက် ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ စဉ်းစား
သလို ၊သူကလဲ ကိုယ့်အပေါ်မှာ တစ်ခုခုထိုးတင်နေသလိုလို တွန်းချနေသလိုလို ဆက်ဆံနေခဲ့ ၊
သူ့အပေါ်မှာ မငြင်းဆန်ရဲသလို တော်လှန်ပုန်ကန်လိုက်ဖို့ကလဲ မလွန်ဆန်ရဲခဲ့ ၊ ဒီလိုပဲ နေကုန်နေခန်း
ပေါ်လာမလားလို့ ထိုင်စောင့်ကြည့်နေရတာပဲ ၊ ဖြုတ်၊ဖျက်၊တပ်ဆင်ကြည့်မိ၊ ကော်လာ့ခ်ျလုပ်စရာ
စာအုပ်ကလဲ အနားမှာ အလွယ်တကူ မရှိခဲ့၊ ဂျာနယ်တွေထဲမလဲ ချာချာလည်သတင်းများနဲ့ဆိုတော့
ထိတွေမိ့သမျှ၊ သိမြင်မိသမျှ၊ မှတ်ဥာဏ်ထဲရှိသမျှ ပြန်ပြန်သုံးကြည့်နေရတာပဲ၊ တစ်ကြောင်းတစ်ပါဒ
ရလိုရငြား စစ်ပွဲသတင်းတွေနားထောင် ၊ သတင်းကြော်ငြာသူလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်း ဟာ ရွှန်းရွှန်းစိုလို့ ၊
ဒီတစ်ပုဒ်မှ မဆုံးသေးခင် ၊ဖျတ်ကနဲနောက်တစ်လိုင်း ကူးသွား၊ ကိုယ်လဲ သူ့နောက်လိုက်နေရတာ
မောပန်းလွန်းလှပါပြီ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မရတော့ရင်တော့ Slyvia Plath လမ်းစဉ်ကိုပဲ ရွေးလိုက်တော့
Posted by phone myint at 9:44 PM No comments: Links to this post
Posted by phone myint at 7:33 PM 1 comment: Links to this post
နာကျင်ခြင်းဟာ မပျံသန်းနိုင်တော့တဲ့ အတောင်ပံပဲ ။
အဝေးက တငွေ့ငွေ့အော်နေတဲ့ အော်သံ ။
ပေါ့ပါးသူ လေထုရဲ့ စွတ်စို ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ။
အရောင်ထဲမှာ အရိပ်တွေရှိတယ် ။
"ဟေး" . . . မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ တိမ်စိုင်တွေ ။
မင်းတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကို အလိုမရှိခဲ့ ။
မွန်းကျပ်ခြင်းနံရံ လေးဘက် လေးတန် ကာရံထားလိုက်တယ် ။
တိတ်တဆိတ် စိမ့်ဝင်လာနေတဲ့ အထီးကျန်မှု သေခြင်းတရား ။
ညစ်ညမ်းမှုဟာ သွေးကြောထဲ လည့်ပတ်စီးခဲ့ပေါ့ ။
Shut up ! ပါ မယုံနိုင်စရာ အဘိဓမ္မာ ဝဝ ဖီးဖီးကြီးတို့ ။
အလိုမပြည့်မှု ဇောချွေးဟာ နဖူးမှ ခြေမသို့ လျှောကနဲ ။
ကစုန်ဆိုင်းနေတဲ့ စိတ်မီးတောက်လေးရဲ့ အဖျား ။
သူတော်မှ ကိုယ်ကောင်းမယ့် ပါရာဒိုင်း အပြောင်းအလဲ ။
တစ်နာရီ ပဲ ချစ်ပါရစေ ။
တစ်ဘ၀လုံး လွမ်းရလဲ အရေးမကြီး ။
ချဉ်ဆီအထိ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ ချင်ခြင်းထဲမှာ ။
ပဲရစ်မြို့ဟာ အချစ်နဲ့ လဲလို့ရော ရလို့လား ။ ။
Posted by phone myint at 8:19 PM No comments: Links to this post
အထိတ်လန့် အခြောက်ခြားရဆုံး စကားလုံး
အမိနိုင်ငံတော် ၊ သမ္မတကြီး ၊ ဒို့တာဝန် ၊ ပြည်ထောင်စု ၊ကုလသမဂ္ဂ ၊ မွေးနေ့ / မွေးရပ်ဇာတိ ၊ ကိုးကွယ်မှု ၊ နာမည်အရင်း ၊အရပ်/ကိုယ်အလေးချိန်/သွေးအမျိုးအစား ၊Astrological sign ၊ မိသားစု ၊ Talent Agency
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း ၊အခွင့်အလမ်း၊ အခွင့် ။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ၊ ကျမ်းကျိန်ချက် ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၊ ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက Hollywood ရဲ့ ကြော်ကြားတဲ့ အလှဘုရင်မ တစ်ဦးသူမရဲ့ အလှအပ ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ ဘဝမှာဘယ်လို နေထိုင်ပါတယ် ဆိုတာ
ထိတ်လန့် ခြောက်ခြား ကျီးလန့်စာစားနေခဲ့ရပုံများ ၊ မြသေလာတောင် ဆွေးဖွယ်နှောင်သည်၊ ထိတ်လန့်၍တုန်လှုတ်သည်။ ခုန်ကူးသည်ခုန်ပျံ ကျော်လွှားသည်။ n ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်း၊ လိုချင်ဆန္ဒများက ပြည့်ဝတယ်လို့ မရှိကြပဲ ၊ အပြုံးနဲ့ကြိုဆို အငိုနဲ့နှုတ်ဆက် ၊ ipod.iphone.ipad.ilove.isaid.isex. ၊လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာစာ ။ ၀ရုန်းသုန်းကား။ ဖရိုဖရဲ။ တွန်းမိ,တိုက်မိ။ သွားကြ,လာကြ။ မင်းမြတ် စင်စစ် ထိုအမတ်ကြီး လေးယောက်တို့အား အခွန်အတုတ်ဘေးကြောင့် ၊
#အဲလီဇဘက်တေလာ ၊ အသိဥာဏ်သည် #အဲလီဇဘက်တေလာ၊ ဦးနှောက်မှ စဖြစ်သလော #အဲလီဇဘက်တေလာ နှလုံးသားမှ စဖြစ်သလော ...#အဲလီဇဘက်တေလာ ၊ sirimangala.com/index.php? ၊ အတွင်းမှ မဖွယ်မရာ မြင်ကွင်းများ ၊ တရုတ်-ရုရှား အစည်းအဝေး၌ ၊ ဧရာဝတီ ၊ လိုချင်ဆန္ဒများက ပြည့်ဝတယ်လို့ မရှိကြပဲ ကျပ် တည်း ၊
အကုသိုလ် ၊ သံဝေဂဥာဏ် ၊ သံသရာ ၊ ရာဇဓိရာဇ် ခြေတော်ရင်း လိမ့်သွင်း ဆက်သ ၊ စပေးဘော (၃)ကြိမ် အထိ လွဲချော် ခဲ့ ၊ အဲဒီငါးတွေက ရေထဲမှာ ငါနားလည်ခဲ့တယ် ... ။
Posted by phone myint at 9:42 PM No comments: Links to this post
၁) ။ အိပ်ယာထ ။ ( ၂ ) ။ မျက်နှာသစ် ။ ( ၃ ) သွားတိုက် ။ ( ၄ ) ။ အိပ်ယာသိမ်း ။
လွန်းပျံယဉ်ပျံမတက်ခင် ။ မီးတဖွားဖွား ။ ဂျိန်းကနဲဂျိုင်းကနဲပါပဲ ဂျိမ်းစ် ။ အိမ်ပြန်ကြရအောင်လား
ဂျိမ်းစ် ရေ ။ ပိုးကောင်တွေ ။ ပြေးနေတာ ။ ဖော်ရက်စ်ဂမ့်လိုလား ။ ဖွာလန်ကျဲ ။ တစ်စစီ ။ တပွင့်စီ။
မဆွတ်မှီကခူး နှင့်သူပါ ဂျိမ်းစ် ။ ကိုယ့်နာမည် ဒေစီဂျိမ်းစ် ။
ဒီညနေခင်းနဲ့ ငါနဲ့ မဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ၀ါကျများနဲ့
ဒီ ညနေခင်းကိုတော့ ခြေထောက်ရိုက်ချိုးမိတော့မယ်
ဒီကောင့် ရွှေအိုရောင် အရည်တွေ စီးနေပုံဟာ
နာသာခံခက် ချင်စရာ သွားရည် တမြားမြား
သေမင်းလို တလှိမ့်ချင်း ၊ တလှိမ့်ချင်း
ငါ့လည်မျိုပေါ် တစ်ရစ်ချင်း တစ်ရစ်ချင်း
လေပူတွေ မှုတ်ထုတ် ၊ ကောင်မလေးတွေ ပါးပေါ်က နံသာမှုန့်တောင်
နာကျင် အချိန်ပိုဟာ ငါ့ပခုန်းပေါ် တွားတက်လာတယ်
နာဇီ ပုံစံ အလေးပြုလိုက်ပြီး ၊ ဖြတ်မောင်း လာတဲ့ “ည” ပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ် ။
ဘယ်သွားမှာလဲ မေးရင် ငရဲဘုံ ဂိတ်ဆုံးပေါ့
“ဥက္ကဌကြီး မော် ခင်ဗျား ချမ်းသာတာ ကောင်းလား ဟင် !” ဆိုတော့
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ဟာ ၀င်းဒိုးပေါ်က ပြုတ်ကျသွားတယ်
ခိုင်မာလာ နှင်းဆီ သီချင်းလေးနဲ့
“သေနာကျ ဘယ်အရက်ဆိုင်က ထ လာတာလဲ ” လို့ မေးလိုက်တဲ့
တပ်နီတော်သား ၊ မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ခြေဖျားမှာ
ညနေခင်းဟာ ကားကနဲ ပျောက်သွားပါရော ။
Posted by phone myint at 8:32 PM No comments: Links to this post
ရန်ကုန်ဟာ ခင်ဗျား ပြင်ချင်တိုင်းပြင်လို့ရတဲ့ ဇတ်လမ်း
ရန်ကုန်ဟာ တက္ကဆတ်မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီလို ခေါင်းစဉ်နဲ့စ
ကြွတက်လာပါပြီ တက်ကြွသော လူကြီးလူကောင်း အပေါင်းတို့ရဲ့
အထူးပြုလုပ်ချက်များနဲ့ တင်ဆက်လိုက်သော အထူး
ကားပေါ်က ယဉ်ကျေး ။ သိမ်မွေ့ ။ ခွေးမသား ။ စပယ်ယာ ။ လူချောလူလှတို့ရဲ့
သင့်နှင့် ရန်ကုန်၏ နံနက်ခင်းကိုသာ ၀င်ခွင့်ပြုသည် စာသားတီရှပ်နဲ့
ထစ်ကနဲရှိ ထုတ်ပစ်လိုက်ကြတာပဲ မြို့သားများ
လိမ်ချင်ရင် ကြိုးကျစ် ၊ ပြောင်ချင်နောက်ချင် ဇတ်ထဲဝင်
ရန်ကုန်ဟာ အချဉ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ( ကတ် )
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်
ငါတို့သောက်နေတာ ရူဘီနဲ့ ပီရီမီယမ်ဂိုးလ် . . . (ဟားဟား)၂ . . သနားတယ်
လူတစ်ကာဟာ ဆူပါမှာ ဆူပါပဲဗျာ၊ နေအထွက်မှာ ရွှေခွက်နဲ့ ငွေမခပ်ခင်
သရီးအင်ဝမ်းလေးတွေ ရေနွေးဖျော၊ အဆာဖြေ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် လုပ်သားပျားများ
busy bee လေးတွေ ပျံသန်း လာပါပြီ ။
ဥုံမဏိပဒ္ဒမေဟုမ် ၊ အောင်သံ ဗုဒ္ဓေ၊ အာဒကေ တွေလဲ လန်းပါစေကြောင်း
ကားမထွက်ဦးတင် ၊ တီးတိုးရွတ် ၊ တောင်းဆုချွေ ၊ လိုရာပြည့်စေ
နောက်ကြည့်မှန်ပေါ်မှာ စံပယ်ရနံများ သင်းပျံ့ရီဝေ
မြို့တစ်မြို့က ၀ှက်ထားသော ဖဲချပ်များ ၊
ရန်ကုန်ကို အောက်ကိုးနဲ့ ရှိုးလို့ မရတော့ဘူးပေါ့ ။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းကအစဘန်ကီမွန်းအဆုံး ၀ိတ်သုံးလိုက်ရင် ဖျားသွားမယ် ။
အရေးကြုံရင် ငါးသိန်းဖုန်းကိုသာ ခေါ်လိုက်သားကြီး ။
တီးဆိုင်မှာ ထီးဆိုင်နဲ့ ငိုင်နေတဲ့ မြို့မဟုတ်တော့ဘူး ။ ဘီယာပါတ်မှာ
မဒီကညာလေးတွေနဲ့ ပလီပလာနှပ်နေတဲ့ မြို့
ရှောပင်းမော်လ်နဲ့ ဟစ်ဟော့ပ်နဲ့ စိုင်းစိုင်း ဘတ်ဒေးနဲ့
မင်းတို့ ခြေထောက်တွေကို လေထဲကို မြှောက်ထားလိုက်
ကိုကြီး . . . ကိုကြီး . . . ဒီနေ့ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းလားဟင် . . .
၂၁ ရာစု မြို့တစ်မြို့ရဲ့ မဟာသင်္ကြန်ကို သားစိုးစောင့်ပါတယ်
နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူ ကိုလံဘတ်စ်ဟာကံစမ်းမဲလဲပါ ။ လန်းဆန်းမောပြေ
မူးယစ်ရီဝေစေတဲ့ ..ခင်မင်ချင်စရာ အမျိုးကောင်းသားကြီးပေါ့
တစ်လုံးလား ၊ နှစ်လုံးလား ၊ သုံးလုံးလား
အလုံးလေးများစွာနဲ့ ပျော်ရွင်စရာ ဆော့ကစား
ငွေသံ ကြေးသံပေးလိုက်ရင် ရင်ငွေ့နွေးနွေးလေးတွေလဲ ခိုလှုံလို့ရပါတယ်
ဥက္ကလာပမင်းကြီး တည်ထောင် ၊ ဦးအောင်ဇေယျ အမည်ပြောင်း
တင်းမာနေတဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြေလျှော့ သွားစေမယ့် မာဆတ်
လိုအပ်သေးရင် နောက်တစ်ဆင့်တက် ၊ အရသာ မြိုးမြိုး မျက်မျက် ရှိစေရမယ့်
ဘတ်စ်ဂိတ်မှာ မုဆိုးတစ်ပိုင်း မိန်းမရိုင်း လေးတွေရဲ့
မာယာ ကျော့ကွင်းမှာ သက်ဆင်းချင်တယ်ဆိုလဲ သက်ဆင်း
အိတ်ကပ်ထဲက ခြသေ့င်္ တွေခုန်ဆင်းသွားရလိမ့်မယ်
မက်စီနဲ့ ဒိုလေးဟာ ကျေးဇူးရှင်လေးတွေ
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စာသားအောက်မှာ
အပေါများဆုံးဟာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ကဗျာဆရာ ဆိုပဲ
ခေးအော့ ဟာ ခင်ဗျားနေထိုင်တဲ့ မြို့ကို ပြန်ပေးဆွဲလိုက်ပါပြီ ။
အသွေးနဲ့ ။ အသားနဲ့ ။ နိုက်ကလပ်ထဲမှာ
`ဟေ့လူ´ . . . ဟိုကားပေါ်က ` သင်အိမ်ပြန်လာချိန် ကို သင့်မိဘ ၊ ဇနီး ၊ သားမယား
များက စောင့်မျှော်နေကြပါသည် ´ စာသားဟာ ရီစရာမကောင်းဘူးလား
Posted by phone myint at 10:48 AM No comments: Links to this post
အမည်မသိ ကြားခံ မီဒီယာ လူ့အဖွဲ့အစည်း
ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်အစစ်
သင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို အလျှင်အမြန် သက်သာစေနိုင်မယ့် X . . X . . X
ယခုကြည့်ရှု နေသော လူ့ဘ၀ အစီအစဉ်ကို
ကျွန်ုပ်တို့မှ ဂုဏ်ယူစွာ တင်ဆက်လိုက်ပါသည် . . . Enjoy the life ။
ဘရာဇီး ကော်ဖီ အရာသာ အစစ်
Blur Blur ကော်ဖီမစ်
ဘာဘာ ညာညာ နဲ့ သာသာယာယာပဲ မဟုတ်လား
9/11 အလွန် အခင်းအကျင်း
ပိန်းကြာရွက်ပေါ် ရေမတင်သကဲ့သုိ့ ဒီကိုဂျင် ။
ဟိုက်ဒေဂါ ။ ဒီဘိုနို ။ မြို့မငြိမ်း ။
ဆောမျုစ် ဟာ ချွဲသလိပ်များ ကို လျှင်မြန်စွာ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ။
ဒရီဒါး ။ တွိုင်ဘီ ။ ဒူးရွှန့် ။ ဘတ်ကတ် ။
အိုဗာတင်းကို မှန်မှန် သောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
ကျွန်မသမီးဟာ အရမ်းကို ပြောင်းလဲသွားပြီ ။
“Poetry is Death ” !!
တကယ်တော့ ကဗျာသေသွားတာဗျ ။
ဟေတီနိုင်ငံ အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခံရမှု
လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ အရေးပေါ်စည်းဝေး ။
ချောင်းဆိုးကင်းစင် ပြုံးပျှော်ရွှင် . . ကိုနီဒင်း ။
ကဒါဖီအား စစ်ရေးအရ အရေးယူမှု စတင်
ရှေးမူမပျက် အုန်းနို့ကျောက်ကျော အာဂါး . . . အာဂါး. . . အာဂါး . . .
ဂျပန်ငလျှင်နှင့် ဆူနာမီ လှိုင်းတိုက်ခတ်မှု ၊ နျုဓာတ်ပေါင်းဖိုများ ပေါက်ကွဲ
ဗျုတီ ခေါင်းလျှော်ရည်ဟာ ထက်ထက် ရဲ့ဆံပင်လေးတွေကို ပျော့ပြောင်း နှုးညံ့
ညင်သာစေပါတယ် ရှင် . . . ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဏုမြူ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ရေး
ပြင်သစ်သမ္မတ မှတင်ပြ ။
နှစ်လည် ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲ တရုတ်ကုန်သည်များဖြင့်
အထူးစည်ကားလျှက်ရှိ . . ။
ဤတွင် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ရှစ်(ထ်) နာရီ ရှိပါသဖြင့်
သတင်းများကို စတင် ကြော်ငြာပါတော့မယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Posted by phone myint at 9:47 PM No comments: Links to this post
ဘလော့ရေးသက့် နှစ်တစ်သန်းပြည့်နှင့်.. Hit သန်းတစ်ထောင်ပြည့် ကျေးဇူးစကား ။
မှန်ရာကို ဆိုရသော် အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော အင်မတိ အင်မတန် ရေးအား ၊ တွေးအား ကောင်း ၍ စာကောင်း ပေမွန် များကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ရေးသားတော် မူထသော ၊ စူပါ့စူပါ မဟာ ဘလော့ဂါ လဲ ဖြစ်တော်မူထသော အကျွန်ုပ်သည် နှစ်တစ်သန်းပြည့် သည်အထိဘလော့စပေါ့ ပလက်ဖောင်း ကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးစွဲတော် မူသည့် အတွက် ဆာဂျီကင်း နှင့် လာရီပေ့ခ်ျ တို့လို သကောင့်သားများ ထူထောင်သော ဖွတ်ချက် ဖွတ်ချက် ဂူဂယ်လ် ကော်ပရေးရှင်း လေး အနေဖြင့် ဦးစွာ ပထမ လွန်စွာ ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူသင့်လှပေသည် ၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူတော် အင်မတန်များသော မြန်မာပြည်သားတွေထဲမှ ကျွန်ုပ်သည် နံပတ်မှာတစ် ဂဏန်းမှာ ၀မ်း ဖြစ်နေသူ မဟုတ်လော . . .။
ကျွန်ုပ် ဘာကြောင့် ဘလော့စရေး ဖြစ်သည်ကို စာဖတ်သူများအား သနားငဲ့ညှာသော အားဖြင့် မအားလပ်သည့်ကြားမှာ အချိန်စဉ်းငယ်ခန့် ဖဲ့ကာ အနည်းငယ် ရှင်းပြရချေဦးမည် ။
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အကျွန်ုပ် နေထိုင်ခဲ့စဉ်အခါက (ဒါကလဲ ကြုံလို့ပြောတာပါ ကြွားတာ မဟုတ်ရ ၊ အများနည်းတူ အလုံးကြီး လွှတ်လိုက်တာ ) ဟိုက်ပါမားကတ် တစ်ခုတွင် အလုပ်ဆင်းရလေသည် ။ အလုပ်ရှင်မှာ အကျွန်ုပ်တို့၏ ဆွေမျိုး ပေါက်ဖော်များ ဖြစ်သည့်အလျှောက် . . ယားလို့ပင် ဟိုဟာ. မကုတ်အားအောင် . . (ဦးခေါင်း ) အလွန်အမင်း ခိုင်းတတ်လေသည် ။ သို့သော် အကျွန်ုပ်မှာ မူ ဂုဏ်သရေရှိ မြန်မာအမျိုးသား ဖြစ်သည့်အလျှောက် နိုင်ငံခြားသားများထံတွင် အညံ့မခံလိုသည် ဇာတိပုည ဂုဏ်မာန ရှိနေသည့် အတွက် တိုင်းတစ်ပါး လက်အောက်ခံ အဖြစ်မှ ရုန်းထွက်ရန် အမြဲ ကြံစည်ကြိုးစားခဲ့ပါပေ၏ ။ ထိုသို့ နေ့မအား ညမအား မည်ကဲ့သို့ တော်လှန်ရမည်နည်းဟု အပြင်းအထန် ကြံစည်ခဲ့ရာ တစ်နေ့တွင် ဤကဲ့သို့သော် အကြံတော် မဟာကြီးကို ရရှိခဲ့ပေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဟိုက်ပါမားကတ်မှ ၀ယ်ယူသည့် Invoice ဘောက်ချာများကို ကွန်ပျုတာ ဖြင့် စာရင်းသွင်းရလေ့ရှိရာ ယင်းအချိန်တွင် ထိုဘောက်ချာများကို ခေါက်ထား၍ အင်တာနက်ကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ အသုံးပြုရန် ဟူလို့ . . . ။
ထိုသို့ဖြင့် သူ့ကျွန်မခံလိုသော ကျွန်ုပ်၏ တကိုယ်ရည် စွန့်စားခန်း တော်လှန်ရေးမဟာကြီး စတင်ခဲ့ပါပေ၏ ။ ကျွန်ုပ်သည်
မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လ ဖြင့် အီးမေးလ် ဖွင့်ထားက invisible လုပ်ပြီး ချတ်၏ ၊ စုံစီနဖာကုန်သော မြန်မာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ ၊ ဖိုရမ်များ (ကိုကိုတို့ အကြိုက် ဟိုဟာ ဒီဟာတွေလဲ ပါသပေါ့ ) အတွင်းသို့ အမည်ဝှက် များဖြင့် ၀င်ရောက်ကာ အမျိုးသားရေး ( အမျိုးသားတွေရဲ့ အရေး ကိစ္စတွေကို ပြောတာပါ ) ကိစ္စရပ်များကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆွေးနွေး ဝေဘန် ၏ ရပ်ဝေးနေ၊ ရပ်နီးနေ အမျိုးတူ ၊ မတူ လုံမငယ် များထံ (ကုလားမလေးတွေတောင် ပါသေး ) မွေးနေ့ဆုတောင်း အီးကတ်ဒ်များ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ မထိတထိ ကလူ၏သို့ မြူ၏သို့ ဆောင်းပါးရိပ်ခြည် ပြောဆိုခြင်း (ဒါကလဲ စည်းရုံးရေးအသွင်နဲ့ပါဗျာ) စသည့်ကိစ္စရပ်များကို အပြင်းအထန် ကြိုးပန်းလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါပေ၏ ။
သို့သော် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေရခြင်းကို မတင်းတိမ် ၊ မရောင့်ရဲနိုင်ခဲ့ပါ ၊ သူ့ကျွန်မခံ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်လွန်းလာသည်အလျှောက် တစ်ခုခု ထပ်လုပ်ရန် အမြဲတမ်း ကြံစည်ကြိုးစားခဲ့လေသည် ။ တစ်နေ့သ၌
ဂူဂယ်လ် ကော်ပရေးရှင်းလေးကို လည်ပတ်စေရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေသည် သူငယ်လေး နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဆာဂျီကင်း နှင့် လာရီပေ့ခ်ျ ဆိုသည် သူငယ်လေး များသည် အကျွန်ုပ်မှ သူတို့ ထုတ်လုပ်သော ဘလော့စပေါ့ ကို မသုံးလျှင် ဘ၀ပျက်တော့မလို ငိုယို၍ တောင်းပန်စာ ပို့လာသည် အလျှောက် အကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်ုပ်၏ အထက်တန်းကျလှ၍ ( အောက်တန်းကျိုးလို့ ) အဆင့်မြင့်လှသော ( ခွေးခြေခုံ တစ်လုံးစာ ) ဘလော့ မဟာကြီး ကို စ . . . . တင် . . . . ခဲ့ . . . ရ . . . ပေ . . တော့ . . . သည် . . (ဒန်တန်တန် )
ကျွန်ုပ် ဘလော့ ရေးသက် နှစ် တစ်သန်း အတွင်း ရေးသားခဲ့ သည်များကို သုံးသပ်ပြရသည်ရှိသော် . . . . .
တစ်ပုဒ် ဆိုဆိုသလောက် ပီပီ ပြင်ပြင် ရေးဖွဲ့နိုင်ကာ သောက်ကျိုးနည်း ကောင်းလှပေ၏
( ကောင်းမှာပေါ့ ငါရေးတာကိုး )
ကျွန်ုပ်၏ ဘလော့တွင် ဖော်ပြထားသော် ကဗျာများကိုသာ မက .. ချပင်မရေးရသေး အတွေးအဆင့် ပင်ရှိသေးသော ကဗျာများ က အစ ကိန်းဘရစ်ခ်ျလို အောက်စဖို့လို ယူနီဗာစီတီများမှ ဘာသာဗေဒ ပါမောက္ခများက စူးစမ်းလေ့လာ ၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြုလုပ်ရန် အလုအယက် တောင်းခံလေ့ရှိ၏ ။
အကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သော Short story ခေါ်သည့် ၀တ္ထုတို များကို ရေးရန်ဆန္ဒ မရှိပါ ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် . . အကျွန်ုပ် ၏ဦးခေါင်းမဟာဖြင့် ဆိုလျှင် စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလို ၀တ္ထုကြီးတွေကို ၁၀ မိနစ် အတွင်း တစ်ထိုင်ထဲ ချရေးနိုင်သောကြောင့် ပါပေ... ထို့ကြောင့် ရေးကြပါစေ .. အပြင်က ဆိုလျှင် ဂါစီယာမားကွတ်ဇ် တို့. ကပ်ဖကာတို့ ဘော်ဒလဲ တို့ .. ပြည်တွင်းကဆိုလျှင် ခင်မင်ရင်းစွဲရှိသည့် ကိုရဲကြီး(သစ္စာနီ) မှစ၍ ဆရာ နေ၀င်းမြင့် တို့ ဆရာမ ခင်ခင်ထူးတို့ ဗိုလ်ကြူး (ကြူးနှစ်) တို့ . . .။
စကားပြေပုံစံတွေကိုတော့ အကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်လှသည့် အလျှောက်.. ပုဒ်ရေ ၁၀ ပုဒ်ခန့် ရေးသားအားထုတ် ခဲ့ပါပေ၏
ထို့ကြောင့် ကိုးကားကြပါစေ ကမ္ဘာ့ စာပေလောက ၊ မြန်မာ့ စာပေလောက ( ပန်းဆိုးတန်းက စာအုပ်ဆိုင်မဟုတ် ) နှောင်းလူများ . . ( ဆယ်ပုဒ်ကြီးတောင်ရှိနေတာပဲ တော်ပြီပေါ့ )
ရုပ်ရှင် ၀တ္ထု ခံစားမှု ဆောင်းပါးများ၊ အခြားစကားပြေများ
ရေးချင်စိတ်မရှိပါ.. သို့သော် မကင်းရာ မကင်းကြောင်း လေးတွေ တောင်းဆိုလာလျှင်တော့ အလျှောက် အလျှောက်ပေါ့လေ....
(တစ်လောက အော်စကာဆု တပြွတ်ကြီး ရတဲ့ King speech လိုကားရိုက်တဲ့ ကလေးတွေကတောင် ဇတ်ညွှန်း လာခွဲခိုင်းလို့ ဟောက်လွှတ်လိုက်သေးတယ် ) ကိုယ်မှမအားတာ နော်...။
ပုံသေ တွေ မရိုက်ချင်ဘူး ပျင်းလာလို့.. အရင်က ကျုပ်ဘာပုံပဲရိုက်ရိုက် အံဩတကြီး ဆုပေးဘို့ပဲ ကြိုးစားနေကြတာ.. လက်ထဲရှိတဲ့ ကိရိယာ မျိုးစုံနဲ့ ပုံဖြစ်အောင် ရိုက်နိုင်တာကိုက ကျုပ်အရည်အချင်းကိုး . . ပလာယာရှိ ပလာယာနဲ့ရိုက် ဓါတ်ပုံဖြစ်တယ်.. ၊ ၀က်အူလှည့်ရှိ ၀က်အူလှည့်နဲ့ရိုက်. . . ဓတ်ပုံဖြစ်တယ် .. အိမ်မြှောင် နှစ်ကောင် မိတ်လိုက်နေတဲ့ ပုံ ရိုက်လိုက်တာ ရိုဒင်ရဲ့ တွေးခေါ်သူ ပန်းပုရုပ်ထက် လွှတ် နာမည်ကြီးတာပေါ့ .. အခုတော့ အဲ့လိုပုံသေတွေ ရိုက်ရတာ ပျင်းလာပြီ ပုံရှင်တွေ ရိုက်ဘို့ကြိုးစားနေတာ ..။ ဥပမာ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ကျုပ်ရိုက်ပြလိုက်တဲ့ငှက်ပုံနော်... သူတို့လက်ထဲ ရောက်မှ ပျံထွက်သွားတာမျိုး..
ကျုပ်အတွက်ကတော့ နတ်သမီးပုံတွေကြီးပဲ သီးသန့် ရိုက်မှာ ။
သနားတယ်` ဗန်ဂိုး ´ . . . ခြံတိုးပေတော့ .. `ဒါလီ´ . . . နာရီ သာပြင်စားတော့...ပြောပြီးပါကောလား ကျုပ်က အနုပညာ မှော် အောင်နေတဲ့လူ ..ကွမ်းတစ်ယာလောက်ဝါးပြီး... ကင်းဗတ်စပေါ် ကွမ်းသွေး ထွေးချလိုက် ပန်းချီကားဖြစ်တယ်.....
ဓါတ်ပုံကိစ္စမှာလိုပေါ့... ဘာနဲ့ ဆွဲဆွဲ ပန်းချီဖြစ်တယ် ကွန်ပျုတာနဲ့လား..ကျောက်သင်ပုန်းနဲ့လား.. ထန်းပက်လက်ခြောက်ကို အဖျားတစ်ဘက် ဖွာအောင် ထု ထုံးပုံးထဲနှစ်ပြီး ဆွဲခါလိုက်ရင်တောင် .. ပန်းချီကား ဖြစ်ပြီး သန်းချီတန်ပါတယ်ဆို....
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျုပ်လို စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ကို ရထားတာ..လူ့လောက အတွက်သာမက.. ၃၁ ဘုံ အတွင်းရော စကြာဝဌာ အတွင်းရော ပြင်ပမှာပါ အင်မတန်မှ ရခဲ လှတဲ့ ဒုလဘ္ဘ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် . ..
သန်းထောင်ချီတဲ့ စာဖတ်သူတွေသာမက မြင်အပ် မမြင်အပ် ၂ ရပ်များစွာ သတ္တ၀ါတွေပါ အကျွန်ုပ် ကို ကျေးဇူးတွေ တင် ပြီး ကျုပ် ဘလော့တစ်ခါ လာဖတ် စာမူခ ဆယ်ဒေါ်လာ မပေးမနေရ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာသွား မှာပါ လို့ . . . . ။ ( လူသန်းတစ်ထောင် ကို ဆယ်ဒေါ်လာနဲ့သာမြှောက်ကြည့် ထောပြီ )
မောင်ဖုန်းမြင့် ( ခတ္တလူ့ပြည်)
ဘလော့ နှစ်ပါတ်လည် တာဝတိန်တာ နတ်ပြည်
ဘလော့ နှစ်ပါတ်လည် ယာမာ နတ်ပြည်
ဘလော့ နှစ်ပါတ်လည် တုသီတာ နတ်ပြည်
Posted by phone myint at 7:12 PM7comments: Links to this post
ဘယ်လိုလဲ ဒီမေးခွန်းက ..
ဘာနဲ့စပြီး ဘာနဲ့ ဆုံးမလဲ အဆုံးအမ မှာ စုန်းမ တစ်ကောင် လို တောက်စား
စားပြီးအိပ်နေ နေသာသပ လေညှာကပဲလို့ ပြောရဦးမယ်
မယ်မယ်ရရ ပြောစရာ မရှိတော့ပြန်ဘူး . .
မနေ့က ကိစ္စ ဟာ ဒီနေ့မှာ သိုးသွားပြီ
ရထား . . ရထား .. ရထား
ခြောက်ဒသမ သုညတစ်လား ၊ ကျိုက်ဝိုင်း စစ်တမ်းလား
ဈေးနှုန်း နဲ့ပိုခ တွက်ပြီးမှ ချိန်မယ်
ဒါမှ အရေ အတွက် ရောင်အားကိုချိန်မှရမှာ . . .
ကျေးဇူး ပြုပြီး ခင်ဗျား ကဗျာစာအုပ်တွေ ထပ်မထုတ်ပါနဲ့ တော့ လား
“ပစ္စည်းကောင်း ကိုင်တဲ့သူတွေရော ဘယ်သူမှ အရောင်းအ၀ယ် မဖြစ်ဘူး။
ကျမဆို ဈေးဦး မပေါက်တာ ၁ ပတ်လောက်တောင် ရှိနေပြီ”
ပိုယဲ့ထရီ ဈေးကွက် အတက်အကျဟာ
တရုတ်လူများ၏ ဝယ်လိုအားနှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးရာသီ နီးလာသည့်အချိန်မှစ၍ ဈေးကွက်အေးသွားလေ့ရှိကြောင်း ။
ခင်ဗျားသိချင်တဲ့ ကဗျာဆရာ အကြောင်းလား
သူ့ယောက်ျားအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို ဆူပူရေးသမားတွေက သိမ်းလိုက်ပြီ။
အင်္ဂါနေ့ကတည်းက ဖုန်းဆက်တာ မရဘူး။
အဲ့ဒီ ဒေသမှာ ကဗျာအလုပ်သမား ၂၃,၆၀၀ ရှိပါတယ်
သူတို့ကို ကုန်းကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကယ်ဆယ် ရပါမယ်။
၀န်ကြီးဌာနတွေက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အမိန့်ပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်လုနီး ရှိနေပါပြီ ။
ကယ်ဆယ်ရေးကာလမှာ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် ရနိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ကိုတော့ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ် တွေ့ရှိမှုနဲ့ အရေးယူရမှာပါ
အစိုးရက ဦးစီးပြုလုပ်နေတဲ့ အရောင်းပြပွဲများ၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်
ကဗျာ့ အရည် ဈေးကွက် တစ်လီတာလျှင် ကျပ်ငါးဆယ်အောက် ရောက်တဲ့ အထိ
ထိန်းချုပ်သွားဘို့လဲ ရှိပါတယ် ။
စားသုံးသူ လိုအပ်ချက်အရ ပုလင်းသွတ် ပြည်ပ ကဗျာ အမျိုးမျိုးကိုလဲ ဆက်လက် တင်သွင်းသွားမှာပါ
ကုန်အမှတ် တံဆိပ် အတုအပ နဲ့
အရည်အသွေး ကောင်း ၊ သင့် ၊ ညံ့ မှာမူ
လူကြီးမင်းများ ၏ ကုသိုလ်ကံပေါ်တွင် သာ မူတည်ပါကြောင်း ။
Posted by phone myint at 10:57 PM No comments: Links to this post
Posted by phone myint at 6:35 PM No comments: Links to this post
အေးစက်စက် နံရံတွေပေါ် ငါ့လက်ဖ၀ါးနဲ့ ပွတ်သပ်ကြည့်မိ
ငါ့ငယ်ဘ၀ အိပ်မက်ဟာ စမ်းတ၀ါးဝါး
ငါနံရံတွေအပေါ် ကို ထပ်စမ်းသပ်ကြည့်မိ
ငါတို့ရဲ့ ကဗျာ ဆရာများ
ငါတို့ရဲ့ပေါ့ပ်စတား ၊ ရော့စတားများ
ငါ့ခွက်ကို ငါ လှမ်းယူလိုက်တယ်
နံရံတွေအပေါ်က အတွေ့အထိဟာ အေးစက်စက်
ငါ့အတွေ့ အကြုံကို ငါပြန်စမ်းမိ
ငါ့ဘ၀ဆိုတာ အေးစက်တဲ့ နံရံတွေကြားမှ ညှပ်လို့ . . . . ။
Posted by phone myint at 12:49 AM No comments: Links to this post
အညွှန်းနှင့် အညွှန်းခံ တို့အား ဗဟိုပြု
အတည်မပြုရသေးသော အိပ်မက်တို့ အား ကောက်သင်းကောက်၍
ဘဝ ဟာ ပုလင်းခွံအလွတ်တစ်လုံးကဲ့သို့ တန်ဖိုးမဲ့သည်
အပြောင်းအလဲများတဲ့ ကမ္ဘာမှာ (ဒီစကားက ဟောင်းနေပြီ )
ချစ်ခြင်း ဟာ ဈေးကျတယ် ( ဟုထင်ရ )
အသိ ချဲ့ထွင်မှု အောက်က အသံမဲ့ မေးခွန်းများ
သမိုင်းဘီး လည်ပုံဟာ သံသယ ဖြစ်ချင်စရာ
နေရောင်ခြည်တွေလို လှို့ဝှက်ချက် ရှိတယ်လို့
ဖြေးဖြေး ပြေးသွားနော် မောနေဦးမယ်
မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူးဟာ ပြုတ်ကျ သွားပြီ
အာကာသထဲက ဘလက်ခ်ဟိုးတွေ အကြောင်း ပြောကြစို့
ငွေတင်းနက်တဲ့ အကြောင်းဆို ပျင်းစရာသိပ်ကောင်းမယ်
အဟောင်းတွေ သိမ်းစရာ မလိုတော့ဘူး
ငါ့တို့ကိုယ်တိုင် က ဟောင်းနွမ်းနေတာ
ဘဝ ဆိုတာကြီး ကို ရီဆိုင်ကယ် လုပ်ပေးပါ
မီနီမားကတ်တွေအကြောင်း ၊ မီနီဘတ်စ်တွေ အကြောင်း ၊ မီနီစကတ်တွေ အကြောင်းနဲ့
မိနီရဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် လေး ပွယောင်းယောင်း ဖြစ်လာ
ဒီနှစ်တော့ မန်ယူဖလားပဲ ၊ ချယ်လ်ဆီး နားကားသွားပြီ
မနက်ဖန် အပိုင် ရထားတယ်ရှိတယ် ပြောရင်း
ဘဝဆိုတာ ကြီးက လေချွန်ပြီး သီချင်းဆိုတယ်
မင်္ဂလာပါ သေခြင်းတရား. . . . ။
Posted by phone myint at 7:47 PM No comments: Links to this post
4th Beyond Pressure Preformance Art Festival Myanm...
ရန်ကုန်ဟာ ခင်ဗျား ပြင်ချင်တိုင်းပြင်လို့ရတဲ့ ဇတ်လမ...
ဘလော့ရေးသက့် နှစ်တစ်သန်းပြည့်နှင့်.. Hit သန်းတစ်ထေ...